China TY Taratasy fandidiana hydraulic Stainless Steel Manual ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy efitrano fandidiana | Wanyu
Ny latabatra fiasan'ny mekanika dia atsangana ary ampidinina amin'ny paompy menaka pedal, izay mandeha tsara ary azo antoka sy azo antoka. Ny fihetsiketsehana hafa rehetra dia ampiasain'ny fitaovana mekanika.
Ity latabatra fandidiana hydraulic ity dia mitaky ny fisorohana ny takelaka amin'ny tongotra, ny fakana an-keriny ary ny fisintahana azy, ary mora ny manitsy azy. Izy io dia mandray fototra miendrika T.
1. Fomba fihodinana
Ny latabatra fandidiana tanana dia azo soloina 360 °, ny dokotera dia afaka manitsy ny zoro arakaraka ny fijoroany mandritra ny fandidiana, izay mampitombo be ny toerana fandidiana mandritra ny fandidiana. (Tsy voatery)
2. Mivadika haingana amin'ny toeran'ny Flex
Ny latabatra fandidiana dia mila 200° protrusion (flexion) eo ambonin'ny latabatra indray mandeha amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tahony, izay azo ampiasaina hanoloana ny fiasan'ny tetezana lumbar.
1. Fihodinana fihodinana
3. Takelaka roa sosona
Ny takelaka dia mitaky tabila fitambarana misy sosona avo roa heny, fiakaran'ny vidin'ny X-ray ary ny fiheverana avo lenta.
4. Fitaovana tsy misy vy
Ny endriny, fotony, tsanganana fananganana ary ny rafitry ny fampitana lehibe dia vita amin'ny vy vy 304, izay mora diovina sy esorina, mahatohitra asidra sy harafesina, miantoka fa tsy harafesina velively.
5. Fanitsiana Hydraulika sy Manual
Ny fampiakarana sy ny fampidinana ny latabatra fiasan'ny hydraulic dia mandray ny karazana paompin-tsolika pedal, izay milamina tsara ary azo antoka sy azo itokisana. Ny hetsika hafa rehetra dia tantanan'ny lohan'ny fampitana fitaovana.
Model item TY latabatra fiasan-tanana TY
Ny halava sy ny sakany 2020mm * 500mm
Fiakarana (ambony sy ambany) 1010mm / 760mm
Takelaka lohany (ambony sy ambany) 45 ° / 70 °
Previous: Tabilao fiasan-tsolika mekanika Hyd-TS-1 ho an'ny fandidiana ankapobeny
Manaraka: TDG-2 China Hot Selling Electric Ophthalmology Operating latabatra miaraka amin'ny mari-pahaizana CE
Tabilao fandidiana fandidiana Hydraulika TS Manual ...